८ खेलाडी सर्वाधिक मूल्यमा अनुबन्धित, कुन खेलाडीकाे मूल्य कति ? - Nepalese Times
८ खेलाडी सर्वाधिक मूल्यमा अनुबन्धित, कुन खेलाडीकाे मूल्य कति ?
नेप्लिज संवाददाता ६ चैत्र २०७७, शुक्रबार १८:०५ (3 हप्ता अघि) ७० जनाले पढ़िसके
काठमाडाैं । नेपालमा पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको नेपाल सुपर लिग–एनएसएल फुटबल प्रतियोगितामा ८ खेलाडी सर्वाधिक मूल्यमा अनुबन्धित भएका छन् ।
शुक्रबार भएको अक्सनमा ए श्रेणीमा रहेका ८ जना खेलाडीले अधिकतम मूल्य २ लाख रुपैयाँ पाएका हुन् । सुजल श्रेष्ठ, दीप कार्की, दिनेश राजवंशी र विकास खवास, एरिक विष्ट, तेज तामाङ, सुनिल बल र विशाल सुनुवार रहेका छन् ।
अधिकतम मुल्य पाएका खेलाडीहरु लक्की ड्रमार्फत उनिहरुको जाने टोली तय गरिएको थियो । अक्सनबाट कुल ९८ जना खेलाडी अनुबन्धित भएका थिए । जसमा ए श्रेणीबाट २१ जना, बी श्रेणीबाट ४१ जना र सी श्रेणीबाट ३६ जना खेलाडी अक्सनमा अनुबन्धित भएका थिए ।
खेलाडी अक्सनमा केहि स्टार खेलाडी अनुबन्धित भएनन् । जसमा अनुभवी खेलाडी विरान महर्जन, रविशंक पासवान, राजेन्द्र रावल, जर्ज प्रिन्स कार्की, हेमन्त थापामगर, जुमनु राईलगायत खेलाडी अनुबन्धित भएनन् । सात टिमले एक सय ५९ खेलाडीमाथि अक्सनमा बोली लाग्दा टिमले माथि उल्लेखित खेलाडीमा कसैले पनि बोलाएनन् ।
बैशाख ११ गतेबाट हुने प्रतियोगिताको अक्सनबाट हरेक टिमले १४–१४ खेलाडीलाई अनुबन्ध गरेको हो । अब खेलाडीले कोटा अनुसार तीन विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गर्न पाउनेछन भने दुई जना ट्यालेन्ट हन्टबाट छानिनेछन् ।
प्रतियोगितामा सहभागी हुने ७ वटै टोलीले यसअघि मार्की खेलाडी र प्रशिक्षक घोषणा गरिसकेका छन् । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा आयोजना हुने लिग बैशाख ११ गतेदेखि २५ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।